က=ကား ….ဟ=ဟိုတယ်….ရ=ရေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » က=ကား ….ဟ=ဟိုတယ်….ရ=ရေ…
Posted by johnnydeer on Apr 16, 2013 in Copy/Paste | 8 comments
အခြေအနေတွေကတော့ အရင်ကနဲ့ အခု မတူတော့တာတော့ အမှန်ပါပဲ….အရင်တုန်းကများ Land Cruiser စီးနိုင်ဖို့ဆိုတာ သိန်းတစ်ထောင်ဆု သုံးကြိမ်ဆက်ပေါက်ရင်တောင် ၀ယ်စီးဖို့ မလောက်သေးဘူးလို့ ပြောယူရပါတယ်…မတ်တူးတစ်စီး သိန်း 1500…လိမိတက်တစ်စီး 450…ဗင်ရှေ့ဆွဲ လ…သ…အ လေးတောင် သိန်း 300 ကျော်…အခု အနေအထားနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တော့ ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် ထင်မိစရာပါ…တကယ်ကြီးကို ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်…ကားတစ်စီး စီးနိုင်ရင် ဆရာကြီးပါပဲ…ကိုယ့်ရှိတဲ့ ကားလေးတောင် အရောင်းကောင်းမိလို့ ကားပြန်မ၀ယ်နိုင်ပဲ ပြုတ်သွားတဲ့ သူတွေလဲ အများကြီးပါပဲ…..
ဟိုတယ်မှာ လာတည်းကြတဲ့သူတွေထဲမှာလဲ ဘယ်လောက်လူပြည့်ပြည့် ကားပါကင်မှာ ရှိလှ လေးငါးစီးပေါ့….အရင်တုန်းကတော့ တည်းခိုတဲ့သူတွေရဲ့ စေတနာ မေတ္တာကို ပြန်လည် တုန့်ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ကားတွေ ပေရေနေတာတွေ့ရင် ရေဆေးပေးပါတယ်…အပို စေတနာပေါ့…ဘာမှ ပေးစရာမလိုပါဘူး….
ကဲ…အခုတော့ ခေတ်ကပြောင်းသွားရော…ကားတစ်စီး သိန်းတစ်ရာနဲ့ တစ်ရာ့ငါးဆယ်ကြားသုံး…ပေါလိုက်တဲ့ကား…ပုံစံပေါင်းစုံ…ကားပေါင်းစုံ ကြိုက်သလိုရွေးစမ်း…တော်ယုံတန်ယုံ စီးပွားရေးလောက်ဆိုရင်ပဲ ကားဝယ်စီးဖို့ဆိုတာ သိပ်မခဲယဉ်းတော့ဘူး….၀ယ်စီးကြတာပေါ့…ကျုပ်တို့ဗမာတွေပဲလေ…အရင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် အိပ်မက်မမက်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကားတွေကို တန်တယ် တန်တယ်ဆိုပြီး…၀ယ်ပြီးတော့ အိမ်ထဲ ဘယ်သူကထိုးထားမှာလဲ…ကားအသစ်လေးနဲ့ ဟိုနားသွား ရွှတ်ကနဲ…ဒီနားသွား ရွှတ်ကနဲ အဆင်လေးကို ချောလို့နေတာပဲ…
ဟိုတယ်ဘက်မှာကျတော့ စ ဒုက္ခရောက်တာက ကားပါကင်…အရင်က လေးငါးစီး…လွန်ရောကျွံရော ဆယ်စီး….အခုများကျတော့
ပြောမပြောချင်ပါဘူး…ဟိုတယ်ရှေ့မှာ ကားတွေ ဖွေးဖွေးကိုလှုပ်လို့….တစ်စီးပေါ် တစ်စီးပိတ်ရပ်…နှစ်ထပ် သုံးထပ် ကန့်လန့်တွေကော…တစောင်းတွေကော စုံနေတာပါပဲ…ကား ရှိုးရွမ်းတွေတောင် ဒီလောက် ကားစုံမှာမဟုတ်ဘူး…
နောက်ပြသနာတစ်ခုက ကားရေဆေးပေးရတဲ့ ပြသနာ…
အရင်တုန်းကတော့ ဆေးပေးနိုင်တာပေါ့…ကားက ဘာမှမရှိတာ…အခုကျတော့ နည်းတဲ့ကားတွေမှမဟုတ်တာ….တစ်စီးက ဆေးခိုင်း….ကလေးတွေကဆေးပေး…ဆေးပေးနေတာ မြင်တော့ ကျန်တဲ့ ကားတွေက ဆေးခိုင်း…ကလေးတွေလဲ မသက်သာလိုက်တာ…ဟိုတယ်အလုပ်ကို မလုပ်ရတော့ဘူး…ကလေးတွေကတောင် ရီစရာ ပြောနေကြသေးတယ်…အကိုတဲ့…ကျွန်တော်တို့ အလုပ်မှားနေပြီထင်တယ်…ရေဆေးဆီလိုက် မှာ အလုပ်ဝင်မိသလားလို့တောင် တခါတလေထင်မိတယ်တဲ့….မင်းတို့ကိုကော ရေဆေးပေးတော့ မုန့်ဖိုးတွေဘာတွေ ပေးကြသေးသလားလို့မေးကြည့်တော့ တချို့ကတော့ ပေးပါတယ်တဲ့…ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့်တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားကြတယ်တဲ့….အဲ့ဒါနဲ့ တစ်ရက် …မှတ်ထားစမ်းကွာ…ဘယ်နှစ်စီး ဆေးပေးရသလဲဆိုတာကိုဆိုတော့ မှတ်ထားကြပါတယ်…၁၆ စီးအကိုတဲ့…သေရောပေါ့ကွာ…တစ်ရက် ကား ၁၆ စီးလောက်ဆေးပေးနေရရင်တော့….
ကဲ…ဒီလိုလုပ်မယ်….ဒီနေ့ကစပြီး…ကားရေဆေးဆိုပြီး ဘောက်ချာထဲ ထည့်တောင်းပေးမယ်….အဲ့ဒီပိုက်ဆံကို ကားရေဆေးတဲ့သူကို ပေးမယ်…မင်းတို့လဲ လခအပြင် ဘေးဘောက်ရတာပေါ့ဆိုတော့ ကလေးတွေလဲ ၀မ်းသာကြတယ်…ကျွန်တော့်စိတ်ထင်ပေါ့….ပိုက်ဆံရှိလို့ ကားဝယ်စီးတာပဲ…ကားရေဆေးပေးတဲ့ သူကို တစ်ထောင်နှစ်ထောင်ပေးရတာ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ထင်တာပါပဲ…မရှိလို့ ၀န်ထမ်းလာလုပ်ပါတယ်ဆို ကိုယ်စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ လုပ်အားကို တိတိကျကျလေး ပြန်ရရင် သူတို့လေးတွေအတွက်လဲ မဆိုးလောက်ဘူးထင်တာပါပဲ…သမ္မတကြီး ပြောတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေး ဒီနှစ်ဆန်းက စ ပြီး အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါဦးမယ်…ကဲ…ဘယ်လို သဘောရသလဲ…အကြံဥာဏ်လေး ဘာလေး ပေးကြဦး…လုပ်သင့်သလား…မလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတာကို…..
အပြောင်းအလဲ ကြုံလာတာဟာ တချိန်တည်းမှာ
Chance နဲ့ တကွ Threat ကိုပါ သယ်ဆောင်လာပါသတဲ့..
ကားများလာတာက အရင်က Customer Service (အနေနဲ့ အလကားပေးခဲ့တဲ့)
ရေဆေးပေးခဲ့တဲ့ Service ကို ဆက်လက်မရပ်တည်နိုင်အောင် ဖြစ်စေတာ လက်တွေ့မဟုတ်လား။
ကလေးတွေကို သည်တိုင်း ဆေးပေး မုန့်ဖိုးယူ ဆိုပြီး ထားရင်လည်း ..အချောင်ခိုသူ တကယ်လုပ်သူ
ဒါမှမဟုတ်သည့်ထက် ပို အရေးပါမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ပစ်ထားပြီး မုန့်ဖိုး ဘေးပေါက် ရဖို့
ရေဆေးချင်သူ စတာတွေ ထိန်းမရမယ့် သဘော မြင်ရပါသေးရဲ့ဗျို့ … နောက်တခုက ရေချိုပြဿနာပါ..
ကလေးတယောက် ကို ၁ထောင်လောက် မုန့်ဖိုးပေးပြီး ရေဆေးလို့ ရနေမယ် ဆိုရင် အစ်ကို့ဟိုတယ်က
တစ်ရက် ဘယ်နှစီးအထိ ရေအဖြုန်းခံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ လစ်မစ် လည်း ရှိသကိုးဗျာ..
သည်တော့ ဒါတွေအကုန် ကာမိအောင်က … Service Menu ထဲမှာ ကားရေဆေးပေးတဲ့ Service
ကိုထည့်လိုက်ပါဗျို့ ..အဲ့ဒါကိုလည်း Customerကို ကြေငြာ ထားဖို့ အသိပေးထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်
ရေဖိုး နဲ့ ၀န်ထမ်းအချိန်ပေးရတာအတွက် တော့ အတိုင်းအတာတခုထိ
ဟိုတယ် ဘက်ကယူစေချင်ပါသည်။ အ၀ီဇိတွင်းတူးတာ နဲ့ မီတာခက အလကားမှမရဘဲကိုး..
အဲ့ …ကျန်တဲ့ အတိုင်းအတာတခုကိုတော့ ချာတိတ်ကိုပေးပေါ့ သူကလည်း အားစိုက်ရတာမဟုတ်လားဗျာ။
သိန်းရာချီတဲ့ ကားဝယ်ဆီးနိုင်သူ ဟော်တယ်လာတည်းနိုင်သူအတွက်တော့ မများတဲ့ ငွေကြေးမို့
ပြသနာ အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူး မှတ်ပါတယ်ဗျ..။
သည်လိုလုပ်ရင် အနည်းဆုံးတော့ ဖလာကျိတ်မယ့် ဂုံးဆင်းမယ့် ကားဆြာတွေ ပျောက်သွားမယ် ထင်ပါရဲ့။
(ဒီစာစုမှာ ကျနော် ပိုစိတ်ဝင်စားတာ ကားပါကင် ကိစ္စဗျို့ ..အချိန်ရရင် ပြန်လာပါဦးမယ်ဗျာ)
အာ .. ဒါများ မေးနေရသေးဗျာ ..
လုပ်အားနဲ့ တန်တဲ့ လုပ်ခတော့ လူတိုင်း ရမှ တရားမှာပေါ့ …
လောကပါလ .. လောက ကို စောင့်ရှောက်တဲ့ တရားတဲ့ ခင်ဗျ …
အထက်က ဟာလည်း လောကကို တရားသော နည်းလမ်းနဲ့ စောင်မတဲ့ သဘောမို့
လောကပါလ တရားတစ်ပါးပဲ ….
ဟိုသီချင်းလေးကတော့ဖြင့် အသွင် မပြောင်းသေးပါဘူး …
မြို့ထဲ လမ်းမပေါ်မှာ .. ကား ရောင်စုံများစွာ .. တစ်စီးမှ ကိုယ် မပိုင်ပါ … ဟာဟ ..
တချို့ သဋ္ဌိန်းအိမ်တွေမှာ ဈေးပေါလာလို့ ကားတွေ လေးငါးခြောက်ခုနစ်စီး တွေ့လာရတယ် …
အောက်ခြေမှာတော့ ဒုံရင်း က .. အင်းး ဒုံရင်းပဲ ရှိသေးတယ် …
အလကားလုပ်ပေးတာ သိပ်ပြဿနာ မရှာပေမဲ့ ပိုက်ပိုက်တောင်းပြီဟေ့ ဆိုရင် မပြောင်ဘူး တို့ ။ ရေ မခြောက်ဘူးတို့ က ကိုယ့်ဆီပြန် တက်လာတော့မယ်လေ .. အရင် က အလကား လုပ်ပေးတာ အခု တော့ ပိုက်ပိုက်တောင်းပြီဆိုပြီး ကိုယ့် အခက်အခဲ ကို နားလည် မပေးဘဲ အမြင်မကြည်လင်မှုသာ တိုးမည်ထင်ပါသည် ။
အဲ နောက်တစ်ခါ ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ကိုဂျော်နီ ဟိုတယ် ဘယ်မှာ ရှိမှန်းမသိပေမဲ့ အကြမ်းဖြင်း အားဖြင့် ကားလမ်း တွေ အတော် ကောင်းလာတဲ့ အတွက် အရင်လို ဗွက် တွေ တစ်အား ညစ်ပါတ်တာတွေလည်း မရှိတော့ကား က သိပ် ရေဆေးမပေးလည်း သိပ် အကြောင်း မဟုတ်တော့ ဘူးလို့ထင်ပါသည် ။
နောက် ၀န်ထမ်း ။ သူတို့ ပိုက်ပိုက် ပိုထွက်လာလို့ ပျော်ပေမဲ့ သူ့ လုပ်အား ကိုယ် ဆုံးရှုံးတော့မှာနော်.. အရင် သူ့ ဘာတာဝန် ပေးထားပြီး မှုလ တာဝန် ထိခိုက်မလားလဲ စဉ်းစားရပါ့မယ် ။
ကျွန်တော် ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ မေးရင် ဂီ ပြောသလို ကိုယ်လိုက်ရမဲ့ ရေ ၊ မီး တွေလည်း ရှိသေးတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လဲ မလုပ်နိုင်ရင်..
“ကားများ များပြားလာသောကြောင့် ကားရေဆေး ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်း အခက်အခဲကြောင့် (—–) ရက်မှ စတင်၍ မေတ္တာဖြင့် ကားရေဆေးမှု့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်”
စာလေး အခန်းထဲ ထည့် ပေးထားလိုက်တော့မယ် ။
သိပ်ဆေးချင်သူရှိရင် မေးမှ charge လုပ်မယ်၊ မကျွမ်းကျင်သူမှ ဆေးပေးမယ် ဆိုတဲ့ သဘော။ တောင်းဆိုမှုကြောင့်သာ ကိုယ့်ဧည့်သည်မို့ အခယူ လုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်အောင်လုပ်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။။။
တခါတလေတော့လဲ ကိုယ့်အမြင်တစ်ဘက်တည်းက လုပ်ရတာ အမှားပါတတ်လို့ တခြားတစ်ဘက်အမြင်ကို မေးစမ်းကြည့်မိတာပါ…အခုလို အမြင်တွေ သဘောထားတွေ ပြောပြတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
တော်ရိရော်ရိ ဆေး = ၁၀၀၀ကျပ်
အမှန်အကန်ဆေး = ၃၀၀၀ကျပ်
အဲလိုနဲ့.. ကားရေးဆေးဖက်က.. ၀င်ငွေဟိုတယ်အမြတ်ကိုကျော်တက်သွားဦးမယ်..
လူစီအောင်… တူးပိစ်ကလေးမလေးတွေနဲ့.. ကားရေဆေးပေးလေ…
သူကြီးပြောသလို သာဆိုရင်တော့ ၀င်လာမစဲတသဲသဲနေတော့မှာပဲ
သူကြီးတို့လို အမျိုးသားတွေအတွက် KTV မာဆတ် တွေအပြင်
လုပ်မှတော့ တစ်ခါထဲ စီးပွားဖြစ် အဲဒီရှေ့မှာတင် ရေဆေးဆီလိုက်ပုံစံ ထောင်ပေးထားလိုက်
အဲဒါဆို ဆေးချင်တဲ့သူတွေ အဖိုးအခပေးလို့ ဆေးလိမ့်မယ်
ဟိုတယ်က ဆေးပေးတဲ့ပုံစံလဲ မပေါက်တော့ဘူး